टल्किने भूत- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
माघ २१, २०७४ जानुका खतिवडा
काठमाडौँ — आधा रातमा उपासनाका आँखा खुले । उनले सिरकबाट अलिकति टाउको निकालेर दायाँबायाँ हेरिन् । चारैतिर चकमन्न थियो । सडकमा बलेको बत्तीको अलिकति उज्यालो पसेकोले उनको कोठा पनि धमिलो देखिएको थियो । उनले हातले यताउता छामेर हेरिन् तर आमा भेटिनुभएन । उनको मुटु छिटोछिटो ढुकढुक भयो । उनी निदाउनुअघि त आमा कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । कहाँ जानुभएछ ?
उनले अलिकति टाउको उठाएर फेरि चारैतिर हेरिन् । उनको ओछयानभन्दा अगाडिको भित्तामा एउटा कालो छाया देखियो । त्यो घरी तलमाथि हल्लिन्थ्यो त घरी दायाँ–बायाँ सथ्र्यो । त्यसको ठीक तल दुइटा आँखा टलक्क टल्किरहेका थिए । उनले आँत्तिएर टाउको सिरकभित्र लुकाइन् । सास बढेजस्तो भएर आयो । एकछिनपछि बिस्तारै सिरक हटाएर उनले डराई डराई अघिको भित्तातिर हेरिन् । त्यो छाया त उस्तै गरी आकार बदल्दै यताउता सरिरहेको रहेछ । टल्किने दुइटा आँखा पनि अझै उनीतिरै हेरिरहेका थिए । उनका हात–खट्टा चिसा भए । डरले उनी काम्न थालिन् ।
आफूलाई बलियो बनाउनेजति प्रयास गरे पनि उनलेसकिनन् र आँखा चिम्लिएर चिच्याइन्, ‘आमा...१’
उपासना चिच्याउँदै रोएको सुनेर आमा दगुर्दै आउनुभयो । अत्तालिएर आउँदा ढोकाको छेउमा उहाँको गोडा ठोक्कियो । आमा आफ्नो नजिकै आएको थाहा पाएर उपासनाले हुत्तिएर उहाँलाई अँगालो मारिन् अनि रुन थालिन् ।
‘के भो, किन रोएकी ?’ आमाले आफ्नो गोडाको दुखाइ बिर्सिएर छोरीको पिठिउँ थप्थपाउनुभयो ।
‘आमा भूत... भूत...’
‘खोई कहाँ छ ?’ आमाले बत्ती बालेर चारैतिर हेर्नुभयो । कोठामा केही थिएन । ‘अघि भर्खरै यहाँ हल्लिरहेको थियो । त्यसका आँखा पनि टलक्क टल्किएका थिए ।’ उपासनाले पनि आमाको कुमबाट अलिकति टाउको उठाएर वरिपरि हेरिन् अनि सुँक्कसुँक्क गर्दै अगाडिको भित्तातिर देखाइन् । उनी अझै डरले कामिरहेकी थिइन् ।
‘कहाँ भाग्यो त अहिलेको अहिल्यै ?’ आमाले ओछयानमा ठयाकठयाक पार्नुभयो । खाटमुनि बिरालो पसेको रहेछ । म्याउँ गर्दै निस्किएर दराजको चेपतिर गयो ।
‘ल, यही हो तिम्रो भूत,’ आमा मुसुमुसु हाँस्नुभयो ।
उपासना आमाको घाँटीमा आफ्ना दुवै हातले बाँधेर छातीमा लिपिस्सै टाँसिएकी थिइन् । आमाले बिस्तारै उनको हात फुस्काएर उनलाई काखमा राख्नुभयो ।
केही बेर थप्थपाएपछि उनी सामान्य हुँदै गइन् । ‘बहादुर छोरीले यस्तो डरपोक हुन सुहाउँछ त ?’ आमाले आफ्ना दुवै हत्केलाले उनको अनुहार च्यापेर आफूतिर फर्काउनुभयो ।
दुई महिनाअघिदेखि मात्रै उपासना एक्लै सुत्न थालेकी हुन् । उनलाई ओछयानमा सुताएर कथा सुनाउँदै उनी निदाएपछि मात्र आमा आफ्नो कोठामा जाने गर्नुहुन्थ्यो । आज पनि उनी कथा सुन्दासुन्दै निदाएकी थिइन् ।
‘आमा मलाई छोडेर नजानुस् है,’ उनले आमाको हात च्याप्प समातेर भनिन्, ‘भूत फेरि आउँछ ।’
‘कहाँ आउँछ ?’
‘उ: त्यहाँ आएर नाच्छ,’ उनले अघिकै भित्तातिर देखाइन् । उनको कुराले आमा एकछिन गम्भीर देखिनुभयो । उहाँले छोरीको पिठिउँमा थप्थपाउँदै बत्ती निभाउनुभयो । साँच्चि नै भित्तामा तेर्सो धर्को दायाँ–बायाँ हल्लिरहेको थियो । दराजको कुनातिर दुइटा आँखा उस्तै गरी टल्किरहेका थिए ।
‘उ: उ: भूत,’ उपासना फेरि अत्तालिएर आमालाई अँगालो हाल्न आइन् । ‘त्यो भूत हो त ? बाटोमा बलेको बत्तीको उज्यालो परेर तिम्रो कोठाको झयालमा हालेको पर्दाको छाया पो यहाँ हल्लिएको हो त, ल हेर त...।’ आमाले पर्दा यताउता चलाउँदा भित्तामा साँच्चै नै छाया पनि यताउता चल्मलायो । उज्यालोमा राखेर आमालेआफ्नो हातको छाया पनि भित्तामा यताउता सारेर देखाउनुभयो । झयालनेर गएर उभिँदा उहाँको अनुहारको छाया पनि भित्तामा डरलाग्दो देखियो ।
‘टल्किने भूत पनि थियो,’ उपासनाको डर अझै हटिसकेको थिएन । ‘त्यो त अझै टल्किरहेको छ नि, उ: हेर त ।’ उपासनाले आमाको हात कस्सेर समातिन् अनि डराई डराई त्यतातिर हेरिन् । साँच्चै नै दराजको छेउमा दुइटा आँखा टलक्क टल्किरहेका थिए ।
‘उ: हेर त, तिम्रो टल्किने भूत,’ आमाले बत्ती बालेर भन्नुभयो । दराजको छेउमा लुकिरहेको बिरालो म्याउँ–म्याउँ गर्दै निस्किएर ढोकाबाहिर गयो ।
‘बिरालो पो रहेछ,’ उपासना थोते दाँत देखाएर रुन्चे हाँसो हाँसिन् । उनको अनुहार अलि उज्यालो देखियो ।
‘बिरालोका आँखा हाम्राभन्दा फरक हुन्छन् । ती अँध्यारोमा टल्कन्छन् बुझयौ ।’
‘किन आमा ?’ उपासनाजिज्ञासु देखिइन् ।
‘बिरालाका आँखामा रेटिनाभन्दा पछि ‘टेपिटम लुसिडम’ नामको एक तह हुन्छ । त्यसले ऐनाको जस्तै काम गर्छ । अँध्यारोमा त्यसमा हलुका प्रकाश पर्‍यो भने पनि त्यसले परावर्तन गर्छ । त्यसैले उसका आँखा टल्किएका जस्ता देखिन्छन् ।’ आमाले उपासनालाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, ‘त्यसैले त हो नि बिरालोले अँध्यारोमा पनि मुसा समाउन सक्छ ।’
उपासना आमाका कुरा ध्यान दिएर सुनिरहेकी थिइन् ।
‘बिरालोका मात्रै होइन, अरू जनावरका आँखा पनि रातमा टल्कन्छन् । राति सक्रिय हुने जनावरहरूले यही ‘टेपिटम लुसिडम’ का कारण अँध्यारोमा पनि देख्न र सिकार गर्न सक्छन् ।’
आमाका कुरा सुनेर उपासनाको डर बिस्तारै हट्दै गयो । भूत भनेको त मनको डर मात्र पो रहेछ । कुरा बुझेपछि उनले आफ्नो मन बलियो बनाइन् । उनका आँखा निद्राले लोलाउन थालेका देखेपछि आमाले उनलाई ओछयानमा सुताइदिनुभयो । केही बेरमै उनी भुसुक्क निदाइन् ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७४ ०८:२८
मंसिर २४, २०७४ जानुका खतिवडा
काठमाडौं — काठमाडौंबाट फर्किएपछि रामु केही दिन कसैसँग बोलेनन् । जति बेला पनि उनी कुनै गहिरो सोचमा डुबेझैं देखिन्थे । सायद साथीहरूसँग पनि कम बोल्न थालेछन् क्यारे ।
‘काठमाडौं पुगेर आउँदैमा यति ठूलो भाको ?’ घनश्यामले प्वाक्क भनिहाल्यो । उसको कुराले रामुलाई नरमाइलो लाग्यो । अँध्यारो अनुहार लगाएर घनश्यामलाई अँगालो हाल्दै उनले भने, ‘त्यसो नभन् न ?’
‘एक हप्ता बसेर आउँदैमा बोल्न छाडिस्, उतै बसेर पढ्न थालिस् भने त हामीलाईचिन्दैनस् होला हगि ?’ घनश्यामले तिखो वचन प्रयोग गर्‍यो ।
‘सँगै हुर्केको, खेलेको साथी पनि कसैले भुल्न सक्छ र ?’ रामुको स्वर रुन्चे भयो ।
‘कुन्नि, के थाहा ?’ हिँड्दाहिँड्दै निहुरिएर घनश्यामले खेतको गराबाट माटोको डल्ला उठायो र पर धान बारीमा पुग्ने गरी हुत्यायो । पाकेको धानका बाला टिप्दै गरेका एक हुल चरा भुर्र उडे । रामुले आँखा झिम्म नगरी आकाशमा कावा खाँदै उडेका चरालाई टुलुटुलु हेरिरहे । घनश्यामले खेतको आलीबाट पाकेको भटमासको एउटा बुटो उखेल्यो र कोसा चुँड्दै टोक्न थाल्यो । एकछिन दुवै चुपचाप अघि बढे ।
‘साँच्चै अर्को वर्षदेखि त ता उतै बसेर पढ्छस् रे होइन ?’ मौनता भंग गर्दै उसले आधा बुटो भटमास रामुतिर बढायो । भटमास लिएर रामु पनि कोसा चुँड्दै खान थाले । केही बोलेनन् । उनको अनुहारमा खुसीका कुनै रेखा नदेखेर घनश्यामलाई उदेक लाग्यो ।
‘स्कुल पनि हेरिसकिस् ?’ टोल्हाइरहेका रामुलाई घनश्यामले फेरि घच्घचयायो ।
‘अहँ,’ रामु भटमास टोक्दै अघिअघि हिँडे । आली साँघुरो थियो । दुवै जना एकसाथ हिँड्न नमिल्ने भएकाले घनश्याम पछिपछि लाग्यो ।
‘तँ त सहरमा बस्न पाउने भइहालिस्, आफू त यो गाउँबाट कतै जान पाउने होइन ।’ घनश्यामले अँध्यारो अनुहार बनायो । उसका आँखामा सहरको रमझम, फराकिला सडक, बडेबडे घर फन्का मार्न आए । उसले इष्र्यालु पाराले रामुतिर हेर्‍यो । रामु आफ्नै सुरमा खुरुखुरु हिँडिरहेका थिए । केही बेर हिँडेपछि उनीहरू मूल बाटोमा आइपुगे । अब एकैछिन हिँडेपछि घनश्यामको घरतिर जाने बाटो छुट्टिन्थ्यो ।
‘सहरमा बस्नुको मजै बेग्लै, हगि रामु ?’ घनश्याम लामा–लामा फड्का मारेर रामुलाई अँगालो मार्न आइपुग्यो ।
‘के कुरा गरेको ? चारो खोज्नु पर्दैन, मीठो खान पाइन्छ भन्दैमा वनको चरीलाई पिँजडामा राख्दा मजा हुन्छ र ?’ रामुका कुरा नबुझेर घनश्याम ट्वाल्ल पर्‍यो ।
‘तँलाई थाहा छैन घनु, सहरमा त वल्लो घरको मान्छेले पल्लो घरको मान्छेलाईचिन्दैन । वल्लो घरमा शोक पर्दा पल्लोघरमा भोज चलिरहेको हुन्छ । दिनभरि कोठामा थुनिएर बस्नुपर्छ ।’
घनश्यामले एकादेशको कथा सुनेझंै गरी एकाग्र भएर रामुको कुरा सुन्यो । बोल्दाबोल्दै रामुका आँखामा पानी भरिएर आएको थियो ।
‘फुर्सदका बेला पनि सबैजना मोबाइल लिएर आ–आफ्नो कोठामा बस्छन् । एक हप्तामै मलाई उकुसमुकुस भइसकेको थियो । त्यसमाथि धूलो, धुवाँ, प्रदूषण ....बाफ् रे १’
छुट्ने बेला उनीहरूले भोलि नौ बजे यही चौतारीमा भेटिएर सँगै स्कुल जाने सल्लाह गरे अनि घनश्याम हात हल्लाउँदै बाटो लाग्यो ।
रामु घरपुग्दा बुवा पनि घाँसको भारी लिएर टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो । एकछिन बुवाले थकाइ मारुन्जेल रामु लुगा फेरेर आए अनि गबुवामा अलिकति पानी र बिटमा नौनी टाँसेर ल्याई बुवाको हातमा दिए । बुवा उठेर दूध दुहुनलाई गुहालीतिर पस्नुभयो । बाख्रा कराइरहेका थिए । बुवाले भर्खरै ल्याएको भारीबाट बकैनो र टाँकीका स्याउला झिकेर बाख्राको टाट्नोमा हालिदिएर हातगोडा धोइवरि उनी भान्सामा आमालाई काम सघाउन गए ।
‘पढ्न जा, राम्रो अंक ल्याइनस् भने सहराँ स्कुलले भर्ना नलेलान् ।’
‘म सहर जान्न आमा । म यहीं पनि राम्रोसँग पढ्दै छु ।’ ‘यतै बसिराखिस् भने जंगली होलास् क्यारे..,’ आमा रिसाएझैं गर्नुभयो ।
‘दिदी पनि बिहे भर जानुभो । म पनि सहर गए तपाईंहरूको हेरचाह कसले गर्छ नि ?’
‘सारसौँदै छौँ क्यारे हामी । तेरै लागि त भन्या हो नि । वाँ मामाले सबै बेबस्था मिलाको छ,’ आमा सम्झाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ।
‘म बस्न सक्दिनँ त्यहाँ ।’ रामु ठसक्क परेर बाहिर निस्किए ।
मामाले मिलाई दिएको घर त्यति नराम्रो पनि छैन । बिहानभरि घरको काम गरेर स्कुल जान पाइन्छ । साँझमा घरको काम सकेर पढ्न पनि पाइन्छ । भने जति नै पैसा दिन पनि राजी नै छन् । आफ्नै उमेरका दाजु र बहिनी पनि छन् । तर रामुलाई कृषियुगको मान्छे भनेर चिढयाउँछन् । जति बेला पनि आआफ्नो कोठामा बसेर कहिले मोबाइल त कहिले ल्यापटपसँग खेलिरहन्छन् । एक दिन मोबाइल ओछयानमै त्यतिकै रहेछ । ओछयान मिलाउन जाँदा उनले भेटेर यसो हेरेका मात्रै थिए, दाइले आएर उनको हातबाट मोबाइल थुतेर ‘तिम्रो गाउँको ढिकी, जाँतोजस्तो होइन नि’ भनिदिए ।
‘कसैको नभएको सुनको मोबाइल, छुँदा पनि खिइजाला जस्तो,’ रामुका आँखा रसाएर आए ।
‘ला है बाबु, यो पुर्‍याएर आइज ।’ बुवाले दूधको गबुवा रामुतिर बढाउनुभयो । रामु गबुवाबाट सिलबरे टयामीमा दूध खन्याउन थाले । काठमाडौंबाट फर्किएपछि गाउँको डेरीमा बिहान बेलुका दूध पुर्‍यााउने गरेका छन् उनले । टयामी लिएर उनी आँगनमा निस्किए ।
‘सहराँ पढ्न नजाने रे,’ आमालेपोल सुनाउनुभयो ।
‘नगए नजाओस्... । छोराछोरी भन्या आफ्नै बाउआमासँग लड्दै पढ्दै हुर्केका बलिया । यो नभा हाम्रो हातै भाँच्चेजस्तो हुन्छ ।’
‘घरै राखेर बिग्रने पो हो कि ?’
‘सप्रन सहरै जानु पर्दैन । यहीं पनि राम्रै पढेकै छ । पोहोर पनि सात किलासमा फस्टै भाको हो क्यारे,’ बुवाका कुरा सुनेर रामुको मन फुरुंग पर्‍यो । उनी मुसुमुसु हाँस्दै बाटो लागे ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:०५